May 2015 - Myanmar News Plus
အိမ်ထောင်မှု သုခအပြည့်အ၀ရဖို့ တလည်းသီးဖျော်ရည်က နံပါတ်တစ်အကောင်းဆုံးဆေးဟုဆို
အိမ်ထောင်မှု သုခအပြည့်အ၀ရဖို့ တလည်းသီးဖျော်ရည်က နံပါတ်တစ်အကောင်းဆုံးဆေးဟုဆို အိမ်ထောင်မှုသုခ အပြည့်အ၀ မရရှိဘူးဆိုရင် တလည်းသီးဖျော်ရည် တစ်ခွက်ကို သောက်လိုက်ပါလို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက အကြံပြုထားပါတယ်။ တလည်းသီးဖျော်ရည်ဟာ အိမ်ထောင်ရှင်တွေအတွက် စိတ်ဆန္ဒကို လှုံဆော်ပေးနိုင်တဲ့ နံပါတ်တစ်ဖျော်ရည်ဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။ တလည်းသီးဖျော်ရည်ဟာ အိမ်ထောင်ရှင်စုံတွဲတွေကိုပိုပြီး ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေနိုင်စေကြောင်း လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ တလည်းသီးဖျော်ရည်မှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ဂုဏ်သတ္တိ အပြည့်ပါဝင်တဲ့အပြင် တလည်းသီးရနံ့နဲ့ အရသာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ တလည်းသီးဖျော်ရည်နှာ ပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်စီက တစ်နေ့တာ လိုအပ်တဲ့ပမာဏရဲ့ ၁၆% နဲ့ ဗီတာမင် B3 ၊ ပိုတက်စီယမ်၊ သဘာဝဖီနောနဲ့ ဖေလးဗိုနွိုက်တို့လည်းပါဝင်နေပါတယ်။ တလည်းသီးမှာအမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုလည်း မြင့်မားတာကြောင့်တလည်းသီးဟာ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို လျော့ကျစေပြီး သွားချေးဖတ်မဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Good Health
သူများတွေလို ဓါတ်ပုံစားချင်လား …..
အလှအပဆိုတာ ကြည့်တဲ့သူနဲ့ ဆိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ အပြင်ပုံနဲ့ယှဉ်ရင် ကြည့်မကောင်းဘူး၊ တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်လို့တော့ ဘယ်အပြောခံချင်ပါ့မလဲ။ ဒီကောင်မလေး ဓာတ်ပုံစားတယ်၊ ချောလိုက်တာလို့ပဲ ဘယ်သူမဆို အပြောခံချင်မှာပဲ။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်၊ ဒီတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ဓာတ်ပုံစားအောင် သင့်ဘက်က ဘယ်လိုလုပ်နိုင်သလဲဆိုတာ ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ မျက်ခုံးမွှေးကို သေချာရိတ်ပြီး ကျနအောင် ဆွဲထားလိုက်ပါ။ ဓာတ်ပုံမရိုက်ခင် သင်လုပ်ရမှာက မျက်ခုံးမွှေးကို ရိတ်ထားဖို့ပါပဲ၊ မျက်ခုံးမွှေးရိတ်ပြီး မျက်ခုံးမွှေးကို ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်အောင် ဆွဲထားမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ သာမာန်အချိန်တွေမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်တာထက် ပိုကြည့်ကောင်းနေမှာပါ။ မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ရှင်းနေပြီး ဓာတ်ပုံထဲမှာ ပိုပြီးတော့လည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိနေပါလိမ့်မယ်။ အကျီအ၀တ်အစားကို မကြေနေအောင် ဂရုစိုက် ၀တ်ဆင်ပါ။ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ သတိထားရမယ့် အချက်ကတော့ အ၀တ်အစားပါပဲ။ ကိုယ်ဝတ်မယ့် အ၀တ်အစားက တွန့်ကြေနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်အလှတွေ ပြင်ထားပြင်ထား ဓာတ်ပုံထွက်လာတဲ့အခါ ကြည့်ရဆိုးနေမှာပါ။ […]
နှုတ်ခမ်းသား ပိုဖောင်းပြည့်စေဖို့ နှုတ်ခမ်းကို ဆးထိုး မပြုပြင်မီ သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ
နဂိုမွေးရာပါနှုတ်ခမ်းအစုံကို ပြည့်ပြည့်ဖောင်းဖောင်း ပိုဖြစ်ချင်သလား။ နှုတ်ခမ်းသား ပိုမိုပြည့်ဖောင်းလာစေဖို့ ပြုပြင်မှု မလုပ်ခင် ဒီအချက်လေးတွေကို သိထားသင့်ပါတယ်။ ၁။ ပန်းချီဆရာတွေ နည်းတူ ဆရာဝန်တိုင်းမှာလည်း သူတို့ သုံးစွဲဖို့ အကြိုက် ဖော်မြူလာတစ်မျိုးစီ ရှိကြပါတယ်။ အစောဆုံးနဲ့ သဘာဝအဖြစ်ဆုံး နှုတ်ခမ်းသားဖြည့်ဆေးက Hyaluronic acid (HA) ပါ။ ၂။ HA က permanent မဟုတ်တာကြောင့် ပြန်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ မကြိုက်ရင် hyaluronidase ခေါ် ဖျက်ဆေး enzyme ဆေးထိုးလိုက်ပြီး ၅ မိနစ်အတွင်း ပျောက်အောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ၃။ အပြီးအစီးထိ $500 ကနေ $2000 အထိ ကုန်ကျနိုင်မှာမို့ မိမိငွေကြေး အခြေအနေကို အရင်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ၄။ HA fillers တွေ […]
ဖူးစာပါလို့ ဆုံဆည်းလာကြရတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦး ဘယ်သူမဆို သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် သစ္စာမဖောက်၊ ယုံကြည်မှုရှိရှိ နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းချင်ကြမှာပါ။ တစ်ချို့အရာတွေက ကံတရားက ကြားဝင်ဖြတ်လို့ ပြတ်သွားတတ်တာမျိုး ချွင်းချက်ထားပြီး ကိုယ့်ချစ်သူဟာ ကိုယ်နဲ့တစ်သက်မခွဲပဲ မြဲမလားဆိုတာ သိချင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ ချစ်သူနှစ်ဦး မြဲမမြဲ ဒီအခြေခံကျတဲ့ အချက်လေးတွေကို ကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ ၁။တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက် ကျေးဇူးတင်စကားဆိုဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ဘေးမှာ အမြဲရှိပေးတဲ့အတွက်၊ ကိုယ့်ကိုနားလည်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း သူ့ကိုရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကို ပြောဖြစ်တယ်။ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကိုလည်း နေ့တိုင်း တစ်ခါနှစ်ခါမက ပြောဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဒီအတွဲဟာ မြဲဖို့သေချာပါပြီ။ ၂။ချစ်သူကောင်လေးဟာ ကျန်းမာတယ်။ အတွဲတစ်တွဲမှာ ချစ်သူကောင်လေးက ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်။ ကျန်းမာရေး လိုက်စားတဲ့သူ တစ်ယောက်ဆိုရင် သင်တို့အချစ်ရေးဟာ သာယာစိုပြေမှာပါ။ ကိုယ့်ရည်းစားက […]
ပထမဦးစွာ ကြက်သွန် အဖြူ အနည်းငယ် ဂျင်း ဆီ လိုအပ်ပါတယ်။ ကြက်သွန်အဖြူကို ပါးပါးလှီးထားပါ။ဂျင်း အနည်းငယ်ကိုလည်း နုတ်နုတ်ဆင်းထားပါ။ ဒယ်အိုးထဲမှာ ဆီ အနည်းငယ်ထည့်ပြီး ကြက်သွန်အဖြူ နဲ့ ဂျင်း မွေးတဲ့ အထိ ဆီသတ်ပြီး မွေးလာပြီ ဆိုလျှင် ငါးခေါင်း အရိုးတွေ စုပေါင်းပြီး ထည့်လိုက်ပါ.. ငါးခေါင်းနဲ့ အတုံးလေးတွေ အကုန် ဆီထိသွားပြီး ငါးအတုံးလေးတွေကို ရေအနည်းငယ် မြုပ်ရုံထည့်ပြီး ပြုတ်ပါ။ အိုးအဖုံးကို လုံအောင် ပိတ်ထားပါ။ မီး အရှိန် လျော့ထားပါ။ ငါးပြုတ်ရည် အရောင် ဖြူတဲ့ အထိ ပြုတ်ရမှာပါ။ အရောင် ဖြူလာပြီ ဆိုလျှင်တော့ ငါးအရိုးထဲမှာ ရှိတဲ့ အဆီများ ထွက်လာပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် လိုအပ်သလို […]
ကင်ဆာအတွက် ကညွှတ်များ (အပန်းမကြီးရင် မျှဝေပေးပါ)
နှစ်ပေါင်းကတော့ နည်းနည်းကြာသွားပြီ လူတစ်ယောက်ကကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အတွက် ကညွှတ်ပင်လိုက်ရှာနေတာ ကျွန်တော် တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်။ပြီးတော့ ၁၉၇၉ ခုနှစ် ဒီဇင်လဘာထုတ် ကင်ဆာဂျာနယ်ကနေ မိတ္တူကူးထားတဲ့စာရွက်တစ်ရွက် ကျွန်တော့်ကို ပေးခဲ့တယ်။ စာရွက်ကအကြောင်းအရာကတော့Asparagus for cancer (ကင်ဆာအတွက် ကညွှတ်များ)ဆိုတဲ့ အကြောင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝေမျှခြင်းသက်သက်သာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ဇီဝဓါတု ပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ Richard R.Vensal, D.D.S ရဲ့ရှာဖွေချက်တွေကနေ ကညွှတ်ကနေ ကင်ဆာရောဂါကုသနည်းကို သင်ယူခဲ့တာ နှစ်အတော်ကြာခဲ့ပါပြီသူရဲ့ပရောဂျက် လုပ်ငန်းတွေထဲမှာလဲ သူနှင့်အတူတကွ လုပ်ကိုင်ခဲ့သလို ကျွန်တော့မှာ စုဆောင်းထားတဲ့ ကညွှတ်ကနေ ကင်ဆာရောဂါ ကုသပျောက်ကင်းသွားတဲ့ အထောက်အထား အချက်အလက်တွေ တော်တော်များများရှိခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒါတွေကတော့ …..၁။လူတစ်ယောက်ဟာ သွေးကင်ဆာဖြစ်တာ မျှော်လင့်ချက် မဲ့လုနီးပါး ဖြစ်နေပြီး ဗုံးဗုံးလဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကညွှတ်ကုထုံးနဲ့ တစ်နှစ် […]
ငွေရေးကြေးရေး ကိစ္စ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မရှိခြင်းက သင်တို့အချစ်ရေးကို ပျက်စီးသွားစေနိုင်
သင်ဟာ သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်နာထုတ်အိတ်တွေရဲ့ဈေးနှုန်း၊ တစ်နေ့တာ အသုံးစရိတ်၊ တစ်လ အသုံးစရိတ်စတာတွေကို ဖွင့်မပြောပဲ သင့်ချစ်သူကို လိမ်ညာထားမိမယ်ဆိုရင် ဒါတွေဟာ သင်တို့ရဲ့အချစ်ရေးအတွက် ဆူးညှောင့်ခလုတ်တွေပါပဲ။ MoneySupermarket.com က စစ်တမ်းကောက်ချက်အရ အတွဲ ၁၀တွဲမှာ ၅တွဲသာ ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ့်အသုံးစရိတ်တွေကို အမှန်အတိုင်းဖွင့်ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်တဲ့။ ဘာလို့များ ကိုယ့်အသုံးစရိတ်ကို အမှန်အတိုင်းမပြောကြပါလိမ့်လို့ သင်တွေးမိလိုက်တယ်မလား။ သူတို့တွေဟာ တစ်ခုခုကို ၀ယ်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ချစ်သူကို ပြောချင်ပေမယ့် ချစ်သူက ၀ယ်ခွင့်မပြုမှာ၊ ကိုယ့်အသုံးစရိတ်ကြောင့် ကိုယ့်ချစ်သူ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်ကြလို့ပါတဲ့။ ဒီလိုကြားလိုက်ရရင် ဒါဟာ အပြစ်ကင်းပါတယ်လို့တော့ ထင်ကြမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီအရာတွေက အတွဲတွေ ပြတ်သွားအောင် ဖန်တီးပစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ ဘယ်သူမှ ထင်မိကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ယုံကြည်မှုဆိုတာ အချစ်ရေးမှာ နံပါတ်တစ် အရေးအကြီးဆုံး အရာပါပဲ။ နှလုံးသားရေးရာ အကြံပေးဖြစ်တဲ့ […]
ဆန်မှုန့်…..၅ဇွန်း (ထမင်းစားဇွန်း)ကောက်ညှင်းမှုန့်…..၂ဇွန်း(….။….)ပဲမှုန့်(အစိမ်း)…..၂ဇွန်း (….။….)ကြက်ဥ….၁လုံး(ခေါက်ထားပါ)ကြက်ဥမထည့်ချင်လဲရပါတယ်ပဲပြုတ်.. …လိုသလောက်နံနံပင်.. ..။….(သေးသေးဖြတ်ထားပါ) ကြက်သွန်မြိတ်.. ..။ဆား…..၂ဇွန်း (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း)ကြက်သားမှုန့်.. ..အနည်းငယ်ရေ…..၅၀၀ml(လိုရင်နဲနဲထပ်ထည့်ပါ) ဆန်မှုန့် +ကောက်ညင်းမှုန့်+ပဲမှုန့်ကို ရေနဲ့ကျေအောင်ဖျော် ပြီးမှ ဆား ကြက်ဥကြက်သားမှုန့် ထည့်ပါ မုန့်အိုးကို မကြော်ခင် ၁နာရီလောက်အလို ဆီသုတ်ထားပါ (non stick အိုးဆိုရင်တော့မလိုပါဘူး)ကြော်မယ်ဆိုမှနံနံပင် ကြက်သွန်မြိတ်ပါရောထည့်မွေပါအိုးပူလာရင် ဆီများများထည့် မုန့်ရည်ကိုမွှေပြီးထည့်ပါ ပဲပြုတ် ထည့်ပါစစကြော်ချင်းဆို ကပ်ပါတယ်မီးအေးအေးနဲ့ပဲကြော်ရင် သိပ်မကပ်ပါဘူးမုန့်ကျက်ရင် ဇွန်းအဖျားနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်းကော်ပါ ၂ခုထပ်လိုက်ရင်ရပါပြီမုန့်ကို ခနခနလှည့်ကြော်ပေးရင်ပိုကြွပ်ပါတယ် ချဉ်စပ် လုပ်ချင်ရင် မုန့်ထဲကို ခရမ်းချဉ်သီးငရုတ်သီးကို ပါးပါးသေးသေး ညှပ်ထည့်ရင်ရပါတယ် ငုံးဥနဲ့ ကြော်မယ်ဆိုရင် မုန့်ရည်ကို တ၀က်ပဲထည့် ငုံးဥဖောက်ထည့်လိုက်ပါဒါဆို ရပါပြီ ရှင် ‎Myanmar Snacks ( မြန်မာ မုန့် ပဲ သွားရည်စာများ )
ကျွန်ုပ်တို့ အများစုဟာ ဘယ်တော့မှ အတောမသတ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိကြပါတယ်။ အဲဒါ ဘဝပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွနု်ပ်တို့ ဘဝမှာ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ဘဝရဲ့ အတက်အကျတွေကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဖြတ်သန်းကျော်လွှားကြတယ်ဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်ုပ်တို့ အလေးမထားဘူး ဆိုရင် အလုပ်အကိုင်၊ မိသားစုနဲ့ အခြားဝတ္တရားတွေမှ လာတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု အားလုံးတို့ကြောင့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ချစ်သူစုံတွဲဘဝ အဓွန့်ရှည်စေဖို့ ရိုမန်တစ် ဆန်တဲ့ ခရီးထွက်ခြင်း ဘာကြောင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅) ချက်ရှိပါတယ်၊ အဲ့ဒါတွေကတော့… ၁။ အချင်းချင်းမှ လွဲ၍ တခြားဘာမှ တွေးစရာမရှိ ယာဉ်ကျောပိတ်ဆို့ခြင်း မရှိဘူး။ ဘီလ်ဆိုလဲ မရှိဘူး။ အလုပ်လဲမရှိဘူး။ ကလေးတွေရှိပြီး ကံကောင်းလို့ ဒီအရာတွေကို ခဏလေး ကြည့်ရှုပေးဖို့ မိသားစုရှိပါက […]